कालिकोटमा बाढी पहिराेबाट १२ जनाको ज्यान गयो, कहाँ कति क्षती भयो ? हेर्नुहोस् बिस्तृतमा — Sanchar Kendra
१काठमाडौंबाट एकैदिन १० जना पक्राउ, को हुन् उनीहरु ?
कालिकोटमा बाढी पहिराेबाट १२ जनाको ज्यान गयो, कहाँ कति क्षती भयो ? हेर्नुहोस् बिस्तृतमा
कालिकोट । कालिकोटमा बाढी पहिराेबाट १२ काे मृत्यु ४ बेपत्ता ३ घाइते । कालिकोटमा बाढी पहिराेमा परी तीन दिनमा १२ जनाकाे मृ’त्युु भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी चन्द प्रसाद गैरेले बताए ।
नरहरीनाथ ७ बाँगाका ६५ बर्षिया गंगे बुढा नीजकी श्रीमती बर्ष ६१ कि नैना बुढा,बुहारी बर्ष २४ कि कुसा बुढा, छाेरी बर्ष १८ कि बिमला बुढाफ बर्ष १० कि चना बुढा, छाेरा बर्ष ८ राम बुढा र बर्ष डेढ का छाेरा चरित्र बुढाको मु’त्यु भएको छ ।
नरहरीनाथ वडा नं ४ माझगाेठीमा पहिराे जाँदा बर्ष ६५ का बाले बुढा र निजकी श्रीमती ६२ बर्षिया मना बुढाकाे मृ’त्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालिकोटका डिएसपी श्यामबाबु ओलीयाले बताएका छन्। यस्तै उता सान्नी त्रिबेणी गापा ७ बर्ष १४ कि बेलपुरा शाहीको मृ’त्यु भएको छ ।
रास्काेट नगरपालिका १ बलवालताेलामा साेमबार बेलुकी गएको पहिराेमा परी बे’पत्ता भएका ५ जना मध्य ५० बर्षिया जयबहादुर शाहीकाे सव फेला परेको छ । तिलागुफा नगरपालिका ७ टाकुलामा खाेलाले बगाउदा खाँडाचक्रनगरपालिका ५ कि ५७ बर्षिया अभिसरा शाहीकाे मृ’त्यु भएको छ ।
रास्काेट नगरपालिका १ काे पहिराेमा परी बे’पत्ता भएका बर्ष १६ कि संगीता शाही, बर्ष ११ कि काैरा शाही बर्ष १५ कि अस्मिता शाही र बर्ष १० का नवीन शाहीकाे खाेजी भई रहेको डिएसपी ओलीयाले बताए । नरहरीनाथ ४ काे रिग्ने पानीमा ५५ बर्षिया रत्न भण्डाराकाे घर पहिराेले भत्काउदा भण्डारा नीजकी श्रीमती बर्ष ५० कि पुन्ना भण्डारा र बर्ष ३० कि गाैरी भण्डारा घाइते भएका छन् ।
बाढी पहिराेका कारण कर्णाली राजमार्ग अवरुद्घ भएको छ । बाढीले नरहरिनाथकाे रहगाड पुल बगाएको छ । घाइतेको उद्दार र बेपत्ता ब्यक्तिकाे खाेजीमा नेपाली सेना, शसत्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र स्थानीय तह लागि रहेका छन् ।
यस्तै मंगलबार रातिदेखि देशका विभिन्न ठाउँमा भइरहेको वर्षाले ठाउँठाउँको जनजीवन प्रभावित भएको छ । न्यून चापीय रेखा नजिक भएसँगै नेपालमा वर्षाको मात्रा बढ्दा पश्चिमी क्षेत्रको जनजीवन प्रभावित भएको छ । बर्दीया, कैलाली, कञ्चनपुर, धादिङ, तनहुँ लगायतका जिल्लामा निरन्तरको वर्षापछि बाढी पहिरो र डुबानका समस्या बढेका छन् ।
पहिरोले उत्तरी पर्वतको जलजला गाउँपालिका–७ धाइरिङका २५ घरपरिवार विस्थापित भएका छन् । पहिरोले घरगोठनै पुरिने अवस्था आएपछि उनीहरु बास छाडेर अन्यत्र जान बाध्य भएका हुन् । धाइरिङका खड्के परियार, सुवास परियार, गौमती परियार, राजु परियार, गोविन्दबहादुर केसी, शिशिर केसी, तारा केसी, यामनाथ पाध्या र डिलसेवा पाध्याको परिवार विस्थापित भएका छन् ।
पहिरोको डरले छिमेकीकहाँ शरण लिएर बसेको पीडित राजु परियारले बताए । सोही ठाउँका गोरे परियारको घर भत्किएको वडाध्यक्ष टुङ्गनाथ शर्माले जानकारी दिए । बाढी पहिरो र डुबानका कारण विभिन्न ठाउँका सडकहरू पनि अवरूद्ध भएका छन् ।
प्रदेश ५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशहरूका थोरै स्थानहरूमा र प्रदेश १, प्रदेश २, बागमती, गण्डकी प्रदेशको एकदुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। आज राति पनि देशभर सामान्य बदली रही धेरै स्थानहरुमा हल्का देखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ । बागमती प्रदेश,गण्डकी प्रदेश र प्रदेश १ का एक वा दुई स्थानहरूमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ।
बाढीपहिरोले मुस्ताङका सडकमा क्षति, बाहिरी जिल्लासँगको सम्पर्क टुट्यो
बाढीले बाटो बगाएको २६ औँ दिनभयो । आकाशको मार्गसमेत मौसमका कारण चार दिनदेखि खुलेको छैन । बजारको भाउ, अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको उपलब्धता सामान्य समयमा जस्तो छैन हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङमा ।
सबै विकल्प बन्द भएपछि जिल्लावासीलाई जिल्लामा उपचार हुन नसक्ने गरी बिरामी पर्दा के गर्ने भन्ने चिन्ताले नराम्ररी पिरोल्न थालेको छ । हिउँदमा भारी हिमपातका कारण खेतीपाती र पशुचौपायाको क्षति व्यहोर्दै आएका मुस्ताङका किसानले वर्षामा बाढी पहिरोका कारण सडकमा क्षति हुँदा कृषिजन्य उत्पादनको बिक्री वितरणमा पनि समस्या भोग्नुपरेको छ ।
गत असार १९ गते भीषण वर्षा हुँदा छिमेकी जिल्ला म्याग्दीसँग सडक सञ्जाल जोडिएको कालीगण्डकी करिडोरको बेनी–जोमसोम खण्डअन्तर्गत घोप्टेभिरमा सडक बगायो । सडक बगाएको झण्डै एक महिना बित्न लाग्दासमेत मर्मत गर्न नसकिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । गत असारको २६ गतेको बाढीले म्याग्दीको गलेश्वरमा बेलिबृज बगाएपछि जिल्ला पुग्ने सडकमा अर्को ठूलो बज्र पर्‍यो ।
‘हामीले घोप्टेभिरमा बगाएको बाटो बनाउँदै थियौँ, नदीको किनार छुनेगरी गहिरिएको छ’, प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेदप्रसाद अर्यालले भने, ‘घोप्टेभिरमा बनाए सडक चल्ला भन्ने थियो, पानी थपियो, ठाउँ ठाउँमा फेरि पहिरो खस्यो ।’ जिल्ला प्रवेश गर्ने एकमात्रै नाका घाँसादेखि माथि जोमसोमसम्म कयौं ठाउँमा सडक बगाएको छ । बेनीबजारदेखि मुस्ताङ जाने सडकमासमेत कतै बेलिबृज कालीगण्डकीले बगाएको छ भने कतै सडकका कल्भर्टनै छैनन् ।
‘एकदुई ठाउँ बनाएरमात्रै सडक चल्ने अवस्थामा छैनन्’, उनले भने, ‘वर्षा रोकिँना साथ काम त थालेका छौँ, बनाएको केहीबेरमै बगाएको छ ।’ सडक सम्पर्क टुटेको जिल्लामा हवाईसेवा समेत प्रभावित भएको छ । लकडाउनका कारण बन्द रहेको डोमेस्टिक हवाईसेवा सञ्चालनमा ल्याउने सरकारी निर्णयसँगै मुस्ताङमा चार्टर जहाज चल्दै आएका थिए ।
पछिल्लो केही दिनयता मौसममा खराबी आएको भन्दै चार्टर जहाजसमेत नचलेकाले जिल्ला पूर्णरुपमा बाहिरी जिल्लासँग सम्पर्कविच्छेद भएको छ । सडक र हवाईमार्ग बन्द हुँदा जोमसोम बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव भएको छ । ‘खाद्यान्नको अभाव अझलाई टारिएको छ तर अझै लामो समय बन्द रहे भन्न सकिन्न’, मुस्ताङ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद तुलाचनले भने, ‘तेल, ग्यास छैन ल्याउने बाटो छैन ।’
मुस्ताङमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव हुँदा बिग्रिएका सडक मर्मतको कामसमेत प्रभावित भएको छ । ‘बजारमा अनुगमन गरेर तेल खोज्दा छ ब्यारेल मात्रै पाइयो’, प्रजिअ अर्यालले भने, ‘कम्तीमा म्याग्दीको सीमासम्मको सडक चले तेलको समस्या टर्ने थियो ।’
सडक र हवाई सेवा बन्द हुँदा अत्यावश्यक कामका लागि जिल्ला बाहिर जाने र बिरामी परेर उपचारका लागि जानेलाई समस्या भएको घरपझोङ्ग गाउँपालिकाका अध्यक्ष आशबहादुर थकालीले बताए ।
काठमाडौंबाट एकैदिन १० जना पक्राउ, को हुन् उनीहरु ?